Google: Miala tsiny izahay fa ny fiteny Kannada dia TSY ny 'ratsy indrindra any India'
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Google: Miala tsiny izahay fa ny fiteny Kannada dia TSY ny 'ratsy indrindra any India'
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • teknolojia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Google: Miala tsiny izahay fa tsy ny fiteny Kannada no 'ratsy indrindra any India'
Ny fanoratana ny «fiteny ratsy indrindra any India» ao amin'ny motera fikarohana Google dia namerina ny "Kannada", fiteny iray ampiasain'ny olona maherin'ny 40 tapitrisa, amin'ny ankapobeny ao amin'ny fanjakana atsimo andrefan'ny Karnataka.
Noteren'ny Google hamoaka fialantsiny amin'ny fanjakan'ny Karnataka any India
Google dia nanamboatra ny valin'ny fikarohana tsy nahitam-bokatra
Miantso ny “hadisoana” nataon'i Google fa tsy ekena ny tompon'andraikitra Indiana
Vao tsy ela akory izay, ny orinasam-teknolojia amerikanina marolafy Google Google dia notafihana taorian'ny nahitana fa ny fanoratana ny "fiteny ratsy indrindra any India" ao anaty motera fikarohana dia namerina ny "Kannada", fiteny iray ampiasain'ny olona maherin'ny 40 tapitrisa, ary ny ankamaroany dia ao amin'ny fanjakana atsimo andrefan'ny Karnataka.
Noterena hamoaka fialan-tsiny ny goavambe amerikana amerikana taorian'ny fitarainana mafy nataon'ny tompon'andraikitra ao amin'ny fanjakana Karnataka.
Tsy ela dia nahataitra ny tompon'andraikitra tao Bangalore, renivohi-panjakana ny fanendrena henjana, izay nandany fotoana kely tamin'ny fanamelohana Google noho ny fanamaivanana ny fitenin'izy ireo ofisialy.
“Ny fiteny Kannada dia manana ny tantarany ary efa nisy 2,500 taona lasa izay! Voninahitr'i Kannadigas nandritra ny roa taona sy tapany ”, hoy i Arvind Limbavali, minisitry ny ala ao Karnataka.
Nangataka fialantsiny tamin'ny Google “ASAP” izy noho ny faniratsirana ny fanjakana sy ny fiteniny, ary nandrahona ihany koa ny fandraisana andraikitra ara-dalàna hamelezana ilay goavambe Silicon Valley.
PC Mohan, solombavambahoaka iray misolo tena an'i Bangalore (fantatra koa amin'ny hoe Bengaluru) Central, dia tezitra toy izany koa, nanamarika fa manana “lova manankarena” i Kannada ary iray amin'ireo fiteny tranainy indrindra eran'izao tontolo izao.
"Kannada dia nanana manam-pahaizana lehibe izay nanoratra epics talohan'ny nahaterahan'i Geoffrey Chaucer tamin'ny taonjato faha-14," hoy ny bitsikan'ilay mpanao lalàna.
Lehilahy politika iray hafa ao amin'ny fanjakana, HD Kumaraswamy, filoha lefitry ny Karnataka teo aloha, no nilaza fa tsy ekena ny “hadisoana” nataon'i Google.
“Tsy misy fiteny ratsy. Mahafinaritra ny fiteny rehetra ”, hoy ny fanamarihany.
Namaly ny valin'ny fikarohana tsy nahitam-bokatra i Google ary namaly ny fialantsiny. Niaiky ilay orinasa fa misavoritaka indraindray ny fisavana azy ary “ny fomba ilazalazana ny atiny amin'ny internet dia mety hisy valiny mahagaga amin'ny fangatahana manokana.”
"Mazava ho azy fa tsy taratry ny hevitr'i Google ireo, ary miala tsiny izahay noho ny tsy fahazoan-kevitra sy ny fijaliana amin'ny fihetseham-po," hoy ny fanamafisan'ny orinasa, ary nilazany fa tsy mitsahatra ny manatsara ny algorithman'izy ireo.